🥇 ▷ Midkee ayaa leh sawiro fiican? FIFA 20 ama eFootball PES 2020? ✅
Midkee ayaa leh sawiro fiican? FIFA 20 ama eFootball PES 2020?
Dad badan ayaa isweydiinaya labada ciyaar ee kubada cagta ee udhow inay arkaan iftiinka uu yahay midka ay dooranayaan. Ma ahan doorasho sahlan, marka la eego in Konami uu si weyn u soo hagaagayey sannadihii la soo dhaafay faa’iido darradii soo food saartay tartamada EA Sports. Hadda maxaa labada kulanba waxaa lagu bixiyaa Xbox Store oo leh labo demos iyo ogaanshaha halganka shati bixinta ee ka dhexeeya labada, arin farsamo ayaa wali la xallin doonaa. Midkee ayaa leh sawiro fiican, FIFA 20 ama eFootball PES 2020?
Si looga baxo shakigaas, iyadoo loo qaadanayo demograamyadaan tixraac ahaan, Candyland waxay go’aansatay inay isbarbar dhig ku sameyso labada kulan si loo go’aamiyo midkee labadan sawir wanaagsan leh, FIFA 20 ama eFootball PES 2020. Haddii shalay aan ku faraxnay isbarbardhigga of FIFA 20 ee ka dhanka ah FIFA 19, kaasoo isbeddelada si muuqata aan loo arki karin, markan waxaan arki karnaa farqiga u dhexeeya labada kulan.
Sanado badan ayay ahayd FIFA sagaalka oo soo bandhigay dhammaystiran guud ahaan ka wanaagsan qaybta farsamada. Laakiin sida aan sheegnay, Konami wuxuu si joogto ah u waday fulinta horumarintiisa shatigiisa. Horeba iyada oo la beddelayo mashiinka ayay suurtogal u ahayd in la caddeeyo taas Kubadda Cagta Pro Waxay soo bandhigtay tafaasiil aad u xiiso badan oo ku saabsan arrimaha sida iftiinka ama sameynta. Si kastaba ha noqotee, FIFA sidoo kale way isbedeshay, in kasta oo natiijadu ay yara yarayn lahayd marka loo eego shaqadii weynayd ee ay qaban jireen.
Iyagoo tixraacaya isla kooxihii ciyaarta demos of FIFA 20 iyo eFootball PES 2020, Saxaafadda waxay rabtay inay isbarbar dhigto, intii suurtagal ah, kala duwanaanshaha dhinacyada garaafyada qaarkood. Qaabaynta ayaa ah mid aad u wanaagsan, halkaas oo aan la dafiri karin in ciyaartooyda kubbadda cagta adduunka hogaamiya ay ku soo dhowaanayaan oo ay xaqiiqda aad ugu dhow yihiin. Haddii aan u dhowaanno ciyaartoydeena, waxay umuuqataa in qaabaynta PES 2020 waa mid aad u faahfaahsan, ama macquul ah.
Mid ka mid ah waxyaalaha iftiinka ku yimaadda waa midabka midabbaynta labada ciyaar, xaggee FIFA 20 waxay u muuqataa inay isticmaasho shaandhaynta oo damisa isbarbar dhigga badan, iyadoo ay jirto PES 2020 midabku wuxuu si xamaasad leh u buuxiyaa sawirka. Dhanka animationka, labaduba waxay leeyihiin wanaag badan, laakiin farqi ayaa sidoo kale lagu xusay. Halkan waxaad moodaa inaadan qiyaasi karin wax intee le’eg labadooda ayaa ku fiican qaybtaan, halka waxa kale ee lagu go’aamin karaa go’aanka ciyaarta ugu fiican mid kasta, waa qaab ciyaareedkiisa iyo xulashooyinka la soo bandhigo.
Si aad u tijaabiso ciyaarta ciyaarta, waxaad had iyo jeer ka faa’iideysan kartaa labada ciyaar oo bixiya demos Xbox One. Ugu yaraan qeybtaas, adoo xiriir la leh ciyaarta, waxaad dooran kartaa wax ka badan mid kale. Go’aanka kama dambaysta ah waa inuu had iyo jeer lahaadaa.